Ka dhig deeqdaada inay sii socoto Siinta Maalinta ugu badan! - Cuntooyinka giraangiraha
Ka dhig deeqdaadu inay sii socoto Sii siinta Maalinta ugu Badan!
Maalinta ugu weyn ee wax bixinta ee Minnesota waxay soo noqotey Nov. 17 waxaanna kugu martiqaadeynaa inaad naga caawiso inaad ka dhigto maalin qaas u ah Cuntooyinka Lugaha Lugta.
Koox deeq-bixiyeyaal deeqsinimo leh ayaa horay u soo qaaday si ay u siiso $1 ciyaar kasta oo $2 ah oo loo kiciyey yoolkayaga ah $25,000 oo ah 'Sii ilaa Maalinta ugu Weyn'! Haddii aan gaarno yoolkeenna, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan taageerno keenista 6,250 cunto iyada oo loo marayo hal maalin oo deeqsinimo ah!
Waxaad jadwal ugu sameyn kartaa hadiyadaada halkan, laga bilaabo Nov. 1! Haddii aad wax sii bixiso waqtiga ka hor, ama aad wax ku tabarucdo Nofeembar 17, waxaan rajeyneynaa inaad naga caawin doonto inaan si buuxda uga faa'iideysano hadiyaddan deeqsinimada leh ee lagu taageerayo waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool magaalooyinka Mataanaha ah.
Waxaan rajeyneynaa inaan wadaagno horumarkayaga maalinta oo dhan Facebook iyo Twitter. Waxaan jeclaan lahayn inaan sidoo kale kaa maqalno adiga! Markaad tabaruc sameyso, noo sheeg sababta aad u bixiso adoo isticmaalaya hashtag #givemeals.
Sanadkii la soo dhaafay, reer Minnesota waxay ugu deeqeen $18 milyan sababaha loo yaqaan 'charitibale sababaha' ee ku saabsan 'Sii maalinta Maxka'. Waxaan rajeyneynaa inaad qeyb ka noqon karto sanadkan weyn ee wax bixinta!
Nofeembar 1, 2016